कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको लफडा? – Butwal 24 News
कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको लफडा?
September 12, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको लफडा?
काठमाडौं, भदौ २७ । सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन। भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालय भागबन्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक दुईदिन लम्बिने भएको छ।
स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा यसपटक माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ। यो मन्त्रालयमा जसपाले पनि आँखा लगाएको छ। खासगरी सुकम्बासी आयोग गठन गर्दा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्त गर्न पाइने र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पाइने हुँदा यसबाट चुनावमा फाइदा पुग्ने विश्लेष्ण माओवादी केन्द्र र जसपाको छ। नागरिक दैनिकबाट
संसदमा माइकले कसैलाई नहान्नू है: ओली
क्याबिनेटमा सँसद बाहिरबाट दुई मन्त्री थपिने